Goobaha Khadka Tooska ah ee Czech - Koodhadhka Gunnada ee Khadka Tooska ah ee Casino
Khamaarka urbi ee Czech Republic
Khamaarista ayaa sharci ka ah Czech Republic, tanina waxay khuseysaa dhammaan noocyada khamaarka. Czechs waa kuwo aan taxaddar lahayn, laga yaabee tani waxay sharraxaysaa joogitaanka casinos ee ku dhowaad magaalo kasta. Waa iska cadahay in khamaarkani darajo sare oo dalka u keenaya faa iido badan. Magaalada caasimada ah Czech, Prague, waxaa ka shaqeeya qiyaastii dhowr iyo toban casinos. Ka mid ah kuwa ugu ixtiraamka badan Atrium Hilton, Danjire Henry.
Bishii Maajo 2016 Guurtida Czech waxay ansixiyeen dhowr biilal, sida ku cad suuqa ciyaaraha gudaha loo furay shirkadaha caalamiga ah. Xogta ku saabsan Janaayo 2017, in laga bilaabo bisha ugu horreysa, waxaa jira in ka badan 100 casinos, oo ay ku jiraan qolalka khamaarka iyo baararka. Makhaayadaha, makhaayadaha iyo meelaha kale ee la midka ah, waxaad sidoo kale ka heli kartaa boosas iyo mashiinno kala duwan. Mashiin kasta oo lagu ciyaaro ee ku taal Czech Republic waxay ku saabsan tahay 200 oo qof.
Khamaarista khadka tooska ah ee Jamhuuriyadda Czech
Waxaan ku xusneynaa galkayaga khamaarka khadka tooska ah in khamaarka khadka tooska ah, iyo sidoo kale dhulka, Jamhuuriyadda Czech ay sharci tahay. Laga soo bilaabo 1 Janaayo 2017 waddanku wuxuu dhaqan galay sharci cusub oo khamaaraya ciyaaraha khadka tooska ah ee Czech Republic. Sida laga soo xigtay isaga, liisanka ayaa hadda heli kara oo keliya kuwa ka shaqeeya khamaarka maxalliga ah, laakiin dhiggooda ka socda Midowga Yurub iyo Aagga Dhaqaalaha Yurub. Waxaa muhiim ah in la ogaado in markii la hirgeliyo wax ka beddelka, Wasaaradda Maaliyadda ee Czech Republic ay leedahay awood dhan oo ay ku horjoogsan karto dhammaan meelaha sharci darrada ah. Waxyaabaha kale, sharciga ku saabsan khamaarka khadka tooska ah ee loogu talagalay dadka ka shaqeeya khamaarka iyo wuxuu dejiyaa heerarka canshuuraha.
Waxaa lagu soo warramey in hawlwadeennadii ugu horreeyay ee goobaha khamaarka khadka tooska ah ka sameeya Czech Republic, la shatiyeeyay 2008 ay ahaayeen SAZKA, Tilmaamaha Synot, Fursadda, Tipsport iyo Fortuna. Qeybta dambe waxay ku leedahay shabakadeeda shabakadaha qamaarka internetka ee isboortiga. Isla mar ahaantaana, Fortune waxay sameysaa bakhtiyaa-nasiibka, iyo xitaa qamaarka taleefanka ee Czech Republic, Poland, Slovakia iyo Croatia.
Liiska ugu sareeya ee 10 Czech Sites Online Casino
Casino Bohemia, jasiiradda caanka ah ee caanka ah ee Czech
Warshadaha khamaarka ee Czech Republic si aad u wanaagsan ayaa loo horumariyay. Tan gudaheeda, sida waddan weyn oo kale, xarumaha khamaarka tobanaan. Prague kaligeed, waxaa jira in ka badan 10 casinos. Hogaamiyayaashoodu waa Atrium Hilton Savarin, Ambassador iyo Henry (casinos, oo leh magacyo kale).
Casino "Atrium" waa hudheel 5-xiddig leh "Hilton". Tani waa guriga ugu weyn ciyaaraha ee Prague, oo bixiya ciyaaro kala duwan oo wanaagsan marka lagu daro heerar kala duwan. Adeeggu wuxuu ka socdaa casaankan Czech Republic wuxuu ku yaal heer aad u fiican, hay'adda lafteedu waxay leedahay naqshad wanaagsan. Ka sokow joogitaanka casino iyo goobaha firaaqada, dareenka macaamiisha inay bixiyaan makhaayad, baarar, barkadda dabaasha, naadiga caafimaadka iyo tas-hiilaadka kale ee firaaqada.
Wakiilka Casino wuxuu ku yaal bartamaha Prague oo ku taal Wenceslas Square hudheelka isla magaca ah. Macaamiisha ugu weyn ee machadkan waa dalxiisayaal ka kala yimid adduunka oo dhan.
Savarin - casino Czech Republic ee Prague , waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn uguna ixtiraamka badan. Waxay ku taal Na Prikope dhisme taariikhi ah oo ku yaal qaabka Baroque, kaas oo la dhisay horaantii 1745. Laga soo bilaabo gudaha casino wuxuu ku riyaaqayaa raaxadiisa wuxuuna ka dhigayaa mid u riyaaqaya qaabdhismeedka. Haddii muuqaalka xaruntan khamaarka ay qarxiso "maalmihii hore", qalabkii loo isticmaalay waxay ku laabanaysaa xaqiiqda booqdayaasha casino iyo adduunka casriga ah. Halkaan waxaad ka ciyaari kartaa ciyaarahan casino sida roulette-ka Mareykanka, pontoon, poker (Toddoba, seddex kaar turub iyo Oasis) iyo mashiinno lagu ciyaaro. Dhamaan macaamiisha casinos waxay bixiyaan cabitaan bilaash ah baarka iyo nasashada. Lacagta laga aqbalay aasaaska ciyaaraha - euro iyo Czech koruna. Galitaanka casino waa bilaash mana ku jiraan wax shuruudo ah oo ku saabsan muuqaalka martida.
Cayaaraha kale ee caanka ah ee Czech Republic
Khamaarka Henry ee ku yaal Wenceslas Square, oo loo yaqaan Alex ama Yalta kale, waxaa lagu gartaa heerka ugu weyn ee ka dhex jira casino kale ee Czech Republic, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay sumcad aad u wanaagsan oo la xiriirta hay'adaha daacadnimada. Sida laga soo xigtay wararka xanta ah, qishka khamaarka waa dhacdo caadi ah. halkan qofna layaab ma leh croupiers badan ayaa haysta dhalashada Ruushka meeshan waa mid soo jiidasho leh xaqiiqda ah in luuqada Ruushka ee loogu talagalay ciyaartoyda ka socota Ruushka.
Waxaan dhihi karnaa dhamaan casinos-yada ka shaqeeya magaalada Prague waxay ku yaalliin bartamaha magaalada. Iyadoo la raacayo, haddii aad rabto inaad hesho hay'ad ku habboon ciyaarta ma ku adkaan doonto ciyaartoy kasta, oo xitaa markii ugu horreysay waxay timid caasimadda Czech.
Inta ugu badan ciyaaraha caanka ah ee kaararka ciyaarta Czech casino: Blackjack iyo Poker . Roulette Available, bakhtiyaa-nasiibka. Sida mashiinnada ciyaarta, waxaa lagu arki karaa oo keliya xarumaha khamaarka ee dalka, laakiin sidoo kale baararka iyo makhaayadaha.
Casinos Regulars ma aha oo kaliya dalxiisayaasha laakiin sidoo kale dadka deegaanka. Sida laga soo xigtay tirakoobyada, Czechs waxay ku hartay hay'adaha lacagta khamaarka 4 jeer ka badan Maraykanka. Laga soo bilaabo dalxiisayaasha tirada ugu badan waa ciyaartoy ka socota Ruushka iyo Shiinaha.
Marka la eego xadgudubyada ka dhaca khamaarka, sida ku cad xogta sanadkii la soo dhaafay, kuwaa waxaa laga helay saddex meelood meel dhammaan goobaha khamaarka. Xadgudubyada qaar waxay ku xadidnaayeen kaamirooyinka amniga ee duubista tayada liita, ku filnaan la'aanta martida evivalii iyo astaamaha. Tusaale ahaan, shaqada xafiisyada ku yaal casino badan Czech Republic ayaa laga qariyey meydadka kormeerka. Xaaladaha qaarkood, waxay xustay daciifnimada ilaalinta shaqada ee hay'adaha.
Sida casino Czech Republic magaalooyinkeeda kale, waxaa laga yaabaa in lagu xuso aasaasida khamaarka "Grand" ee Brno (magaalada labaad ee ugu weyn dalka), laga bilaabo 13-00 maalin waxayna xirtaa 4-00 am. Madadaalada waxaa jira roulette, craps iyo mashiino.
Dhisida khamaarka caanka ah "777" ee Teplice (halkaas oo laga heli karo kaararka ciyaaraha, roulette iyo madadaalo kale) iyo casino kale Czech Republic.
Khamaarista wadanka Czech
Sagaarkayaga casinos-ka ugu fiican Yurub ayaa sii socda. CasinoToplists waxay kugu martiqaadayaan mid ka mid ah xarumaha dalxiis ee ugu weyn adduunka - caasimada Czech, Prague.
Czech Republic - dulmar guud oo taariikhi ah oo joqraafiga ah;
Hadda casinos dhulka ku yaalla dalka ayaa hadda loo oggol yahay;
Casinos-Land-ku salaysan iyo taxane poker online ee Prague Prague Poker Tour iyo World Poker Tour;
Soojiidashada Prague iyo xaqiiqooyin xiiso leh.
Ujeedkeennii ugu dambeeyay wuxuu ahaa Belarus, ka horna waxaan joognay Estonia, Latvia, Lithuania iyo Poland.
Malaha, waxaan u helnay macmacaan, mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan Yurub iyo adduunka - Prague. Czech Republic caan kuma aha oo kaliya biirka, cuntada raqiiska ah halkan, hiddaha iyo dhaqanka dhaqameed hodanka ah, adeeg aad u fiican iyo casinos aad u kala duwan.
Prague, Czech Republic: Caasimadda Boqortooyada Quduuska ah ee Boqortooyada
Xusuusintii ugu horreysay ee Prague waxay tagtaa qarnigii VI ka hor dhalashadii Ciise. e., iyo khilaafaadka ku saabsan asalka magaca magaalada ilaa maanta ma taagna. Qof ayaa ku doodaya in dejinta loo magacaabay ereyga "marin" ama "ford", laakiin tani waa mala awaal.
Guud ahaan, Prague ma khuseyso Bariga Yurub, tani waa xarun dhab ah, laakiin xaaladdan sidaas muhiim uma ahan. Waxa muhiimka ah waa in Prague qarniyo badan ay ahayd xarunta gobolka. Magaaladu waxay booqatay caasimaddii Boqortooyadii Roomaanka ee Barakaysnayd, Bohemia, Czechoslovakia.
Waxay sidoo kale si firfircoon u horumarineysaa dhaqanka iyo sayniska. Dhamaadkii qarnigii 16-aad wuxuu ku noolaa Prague deenish falanqeeye, falanqeeye iyo alchemist Tycho Brahe.
Xaqiiqdii, caasimadda Czech Republic waxay ka mid tahay saddexda magaalo ee Yurub ugu booqashada badan. Waxay ka horreysaa tan Paris laakiin London.
Khamaarka looma mamnuuco Czech Republic. Wadarta Prague waxay ka badan tahay 10 casinos - wadar ahaan qiyaastii 230 mashiinno naadi iyo 130 miisas ciyaaro ah.
Guryaha khamaarku waxay ku yaalliin qaybo kala duwan oo magaalada ah, kuwa ugu fiican - waxay u dhow yihiin bartamaha ama bartamaha. Qaabka hawlgalka oo isku mid ah - oo leh fiidkii dambe iyo ilaa subaxdii, toddobo maalmood usbuucii.
Dhinaca kale caasimadaha kale ee yurubta yurubta ah Prague waa runtii meel caan ah oo loogu talagalay ciyaartoyda xayawaanka oo dhan.
Waxay martigelisaa marxaladaha taxanaha waaweyn - by Europe Poker Tour iyo World Poker Tour. Sannad kasta, bisha December, Prague waxay qabatay xaflad foojignaan oo weyn, taas oo soo jiidata ciyaartoyda caanka ah ee ugu caansan iyo khamaarista hiwaayadda.
EPT, guud ahaan waa "marti" at Hilton Prague , taas oo ah casino casri ah Artrium ; iyo WPT badanaa waxay doortaan casino kale - Card Casino Prague , meel kale oo caan ah oo loogu talagalay dhammaan ciyaartoyda.
Dhamaan hay'adaha waaweyn ee Prague waxay leeyihiin dhamaan kulamada ugu caansan ee casino - blackjack, mashiinada ciyaarta, roulette, poker, iwm. adeegga heerka ugu sarreeya, iyo qurxinta hoolalka khamaarka ee mudan in lagu soo bandhigo matxafyada.
Waxyaabaha ugu horreeya marka hore, haddii aad rabto inaad dhadhamiso farxadda fasalka koowaad, waa lagama maarmaan inaad tagto Wenceslas Square . Waxaa jira dhowr naadi oo casri ah oo heer sare ah - tusaale -mutiyeed Savarin iyo Banco . Labaduba waa kuwo aad u fiican, si kastaba ha ahaatee, ugu horeysay ee lagu garto maqnaanshaha xeerka labiska iyo sicir-gelinta, iyo sida ugu habboon badi dalxiisayaasha.
Magaalada 1.Star iyo Charles Bridge: ma jiraan wax soo jiita dalxiisayaasha, sida qaabdhismeedka cajiibka ah ee Prague. Qaybta taariikhiga ah ee magaalada waxaa lagu daray liiska UNESCO ee Dhaxalka Dunida.
Dhismayaasha waxaa mararka qaarkood lagu sameeyaa noocyo kala duwan, laakiin noocan oo kale ah isku dar ah oo abuuraya dhadhan gaar ah ee Prague.
In caasimadda Czech ah oo badan oo xiiso leh (magaaladu waxay ku taallaa webiga Vltava), ugu caansan oo, dabcan, waa Charles Bridge. Dhismahan gaarka ahi waa nus kilomitir dhererka iyo mitirka mitirka 9.5, wuxuu u furan yahay oo kaliya dadka lugta leh oo lagu qurxiyo seddex sawir oo farshaxan iyo kooxo farshaxan.
Ku soco buundada - waa qayb qasab ka ah barnaamijka dhaqanka ee dalxiise kasta.
2. Castle Castle: waxaa loo tixgeliyaa qalcadda ugu weyn adduunka, analoogga Ruushka ee "Kremlin".
Castle wax yar bay ka fog tahay bartamaha, oo si qurux badan ayay uga sarraysaa magaalada. Iyadoo aan loo eegin ujeedooyinka safarkaaga Prague waa meel mudan in la booqdo marka hore. Halkan waxaa ku yaal soojiidasho kale oo muhiim ah - the Kaniisadda St. Vitus.
3. Josefov: Qaybta taariikheed ee muhiimka ah ee magaalada, muddo dheer ayaa loo tixgeliyay meel ay degan yihiin dadka Yuhuudda ah.
Quarter waxaa loo yaqaan kaliya ma ahan dhismaha, laakiin sidoo kale sababtoo ah halkan waxaa ku dhashay qoraa weyn Franz Kafka.
Xaqiiqooyinka ku saabsan Jamhuuriyadda Czech
Dadweynaha: 10.5 million.
lacagta: Korunka Czech
Sida loo tago Prague: Caasimada Czech - magaaladu aad ayey caan u tahay; halkan waxaa laga bilaabay duulimaadyo toos ah oo ka imanaya magaalooyinka waaweyn ee Ruushka, oo ay ku jiraan Samara iyo Yekaterinburg. Tareennada, sidoo kale, wax dhibaato ah ma leh.
Jamhuuriyadda Czech on Map of Europe
Dalka Jamhuuriyadda Czech waxaa jira dal aad u qamaaraya, taas oo ah sababta ay u khamaaraan waddankan waa mamnuuc oo waa heer sare. Kantaroolka Jamhuuriyadda Czech waxaa si rasmi ah loogu metelaa magaalo kasta, laakiin badankeeda waxaa lagu horumariyaa Prague. Waxaa jira toban ka mid ah halkan. Casinos ugu ixtiraam badan waa xarumaha sida Atrium-Hilton, Ambassador, iyo Henry.
Khamaarka "Atrium-Hilton" wuxuu ku yaal bartamaha magaalada dhismaha hoteelka oo leh magac caalami ah - "Hilton". Aag ahaan waa hay'adda ugu weyn Prague. Marka lagu daro ciyaaro aad u tiro badan, booqdayaasha Atrium waxay awoodi doonaan inay ka faa'iideystaan ​​heerar kala duwan. Sidoo kale khamaarigan waxaa lagu yaqaan adeeg heer sare ah. Marka lagu daro hoolka gaarka ah ee casino, aasaaska waxaa ku jira sauna, barkadda dabaasha, baarka, naadiga jimicsiga iyo dukaamada xusuusta.
Bartamaha magaalada taariikhiga ah ee Wenceslas Square waa casaan caan ah oo loo yaqaan "Ambassador". Waxay ku taalaa huteelka isla magacaas leh. Kasiinada ku taal Czech Republic waxaa loogu talagalay xaqiiqda ah in booqdayaasheedu noqon doonaan, badanaa, dalxiisayaal. Sidaa darteed, adeegga waxaa lagu fuliyaa dhowr luqadood.
Mid ka mid ah casinos ugu da'da weyn Czech Republic waa hay'ad lagu magacaabo "Savarin". Waxaa laga heli karaa Wadada Prikope. Kasiinadan waa adag tahay in aan la dareemin, maxaa yeelay waxay ku taal dhisme sumad u leh Prague. Dhismahan waxaa la dhisay 1745 wuxuuna noqday tusaalaha koowaad ee qaabka Baroque. Gudaha "Savarina" waxaa lagu kala soocay boqortooyada boqortooyada. Dhamaadkiisa waxaa loo isticmaalay dahab iyo lacag. Kaniisadan, booqdayaashu waxay ku ciyaari karaan roulette-ka Mareykanka, turub, pontoon, iwm. Waxaa xusid mudan in meesha laga galo “Savarin” aan laga qaadin khidmad gaar ah. Intaas waxaa sii dheer, makhaayadda waxay ku daaweyneysaa martida cocktails iyo cabitaan bilaash ah. Khamaarista waxaa lagu aqbalaa euro ahaan iyo Czech korunas labadaba.
0.1 Khamaarista khadka tooska ah ee Jamhuuriyadda Czech
0.2 Liiska ugu sareeya ee 10 Czech Sites Online Casino
3 Casino Bohemia, jasiiradda caanka ah ee caanka ah ee Czech
3.0.1 Cayaaraha kale ee caanka ah ee Czech Republic
4 Khamaarista wadanka Czech
4.0.1 Prague, Czech Republic: Caasimadda Boqortooyada Quduuska ah ee Boqortooyada
4.1.1 Soojiidashada Prague
4.1.2 Xaqiiqooyinka ku saabsan Jamhuuriyadda Czech
4.1.3 Jamhuuriyadda Czech on Map of Europe
2020 majirto gunno lacageed oo loogu talagay guryaha wadada ayaa dib u soo celisa khamaarka